Uzakungcwatywa ngokomoya uDavid Stuurman eHankey | Ilisolezwe
Uzakungcwatywa ngokomoya uDavid Stuurman eHankey
Iindaba / 15 June 2017, 02:00am / Siyabulela Mqikela
Umphathiswa ephahlwe zinkokheli zesizwe samaKhoisan eziquka uNkosi Christian Martin kwanamagosa esebe.
Kutshiswa umphafa yindoda yesizwe se-Aboriginals eSydney
Uzakungcwatywa ngokomoya ngomso eGamtoos eNelson Mandela Bay uDavid Stuurman, owayeyinkokheli yesizwe samaKhoisan eyathi yayakubhubhela eSydney eAustralia ngonyaka ka1830.
Oku kusemva kokuba eli gorha lithe layakulandwa kwela lizwe lase-Australia ngokomoya ligqiza lorhulumente weMpuma Koloni, likhokelwe ngumphathiswa uPemmy Majodina kunye neenkokheli zesizwe samaKhoisan.
Eli gorha labhubhela kwela lizwe emva kokuba lathi layakudidinjelwa kwizisele ezahlukileyo eAustralia emva kokulwisana nenkqubo yobukoloniyali.
UStuurman yenye yeenkokeli zamaKhoisan eyazibalula ngokulwa ngokuchasene nenkqubo yobukoloniyali de yavalelwa izihlandlo eziliqela esiqithini iRobben Island.
Ngenxa yobuqili bakhe, uqhweshe kaninzi kwesa siqithi, nguye owayekhokele amabanjwa awathi aqhwesha eRobben Island ngoDisemba ngo1809 ekunye noNkosi Makana kaNxele. Kamva waphinda wabanjwa ngo1819, waza waphindela eRobben Island nekuthe emva koko wathunyelwa kwelase-Australia ngoTshazimpuzi ngo1823.
Ingxelo yeSebe leMidlalo neNkcubeko kweli phondo, ithi ngamalungu osapho lakwaStuurman kunye neeNkosi zesizwe samaKhoisan eMpuma Koloni ebeziyinxalenye yeli gqiza eliye kuthatha uStuurman.
Othethe egameni lela sebe uAndile Nduna uyacacisa. “UNkosi uChristian Martins nguye okhekele iqela leeNkosi zesizwe samaKhoisan, umphathiswa uPemmy Majodina kunye namagosa aphezulu kwisebe lemidlalo nenkcubeko,” uthethe watsho uNduna.
Uthi kusetyenziswe indlela zamandulo ukuthatha umphefumlo weli qhawe ukuwubuyisela ekhaya eMzantsi Afrika.”
Phakathi kwezinto ezisetyenzisiweyo kuquka umthi womphafa nengubo ngenxa yenkolo yokuba uzakuhamba ngokomoya ukusuka eAustralia,” utsho uNduna.
Indawo ebengcwatywe kuyo uStuurman noogxa bakhe sele kwakhiwa kuyo umzila kaloliwe eNew South Wales, kungoko kunyanzeleke ukuba athathwe ngokomoya.
Sithetha ngalo mcimbi noNkosi uJoseph Kreeling wesizwe samaGriqua yena wathetha wathi. “Ayikho enye indlela ebekunokwenziwa ngayo, bekumele ukuba abuyiswe ngokomoya kuba lininzi eli xesha wabhubhayo lo tata, siyavuya kakhulu ngenxa yokubuyiswa kwakhe,” watsho uKreeling.
Eli sebe lenza lo msebenzi lilandela isigqibo seKomishoni yeNyani noXolelwaniso, neyathi yagunyazisa ukugujululwa kwamangcwaba, ukubuyiswa kwabantu kwanokudalwa koxolo phakathi kwabantu.
“Apha eMpuma Koloni sinomthetho ogunyazisa ukugrunjwa, ukungcwatywa kwakho kwanokubuyiswa kwabantu ababengamaxhoba enkqubo yengcinezelo, siqhuba nelo phulo ke apha,” ucacise watsho uNduna.
Ngokomoya, uStuurman uzakungcwatyelwa eHankey kumangcwaba ekungcwatywe kuwo amaqhawe afana noSarah Baartman nanjengoko wayesoloko esilwela ukukhuselwa kwala mhlaba neMpuma Koloni ngokubanzi kugonyamelo lwabasemzini.